ဂဏန်းချဉ်စပ်၊ ပုဇွန်နှမ်းကပ်ကြော်နဲ့ နှုတ်ဆက်တဲ့ညနေ..
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Saturday, December 17, 2011 Saturday, December 17, 2011 Labels: စားသောက်ဖွယ်ရာ
ဖေ့ဘွတ်မှာ ညီမလေးတစ်ယောက်က ဂဏန်းချက်နည်းလေး ရေးပေးပါဦးဆိုလို့ မနေ့ညက အိမ်အလည်လာတဲ့ ညီမလေး ၂ယောက်ကို ပြန်ခါနီးချက်ကျွေးတဲ့ ဟင်းတွေကို တင်လိုက်ပါတယ်နော်။
စားဖြစ်တာတွေက ဂဏန်းချဉ်စပ်ချက်၊ ပုဇွန်နှမ်းကပ်ကြော်၊ ကြက်ခြေထောက်ချဉ်စပ်တို့ပါ။ ချက်နည်းတွေကတော့ လွယ်လွယ်ကူကူပါ။
ဂဏန်းကို ရေစင်အောင်ဆေး၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးတော့မှ ရေနွေးနဲ့ အရင်ပြုတ်ပါတယ်။ အချိန် ခဏတာပြုတ်ပါတယ်.
ကျွန်မက ဂဏန်းကို ဆီသတ်ပြီး မချက်ဘဲ အဆာပလာ အားလုံးထည့်နယ်ပြီး ချက်တဲ့နည်းနဲ့ ချက်ပါတယ်။ ပြုတ်ပြီး ဂဏန်းများကို ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီထောင်း၊ ငရုပ်သီးစိမ်းများများထောင်း၊ ခရမ်းချဉ်သီးတစ်လုံး တောက်တောက်စင်းထည့်၊ ဆီ အနည်းငယ်၊ နံနံ၊ ပင်စိမ်း၊ဖက်ဖယ်စတဲ့ ဟင်းခတ်ရွက်တွေထည့်၊ တိုကျန်ခေါ် တရုတ်ပဲငပိ အနည်းငယ်၊ ဆား၊ အရသာမှုန့်များထည့်ပြီး နယ်ပါတယ်။
အဆာပလာ အားလုံးစုံရင် ရေထည့်ပြီး တည်လိုက်ပါတယ်။မကြာခင်မှာတော့ အနံ့လေး မွှေးလာပါပြီ။
ဂဏန်းတွေကျက်လို့ ချကာနီပြီဆိုတော့မှ သံပုရာသီး မိမိနှစ်သက်တဲ့ ပမာဏကို အရည်ညှစ်ပြီး ရောမွှေလိုက်ပါတယ်။
သံပုရာနံ့လေး မွှေးနေတဲ့ ဂဏန်းချဉ်စပ်ပါ။
အရင်က ချက်စားဖြစ်တဲ့ ဂဏန်းကို မဆလာလေးနဲ့ ချက်နည်းကတော့ ပထမဦးဆုံး ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူကို ဆီသတ်ပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့ဂဏန်းတွေကို ထည့်၊ မကျည်သီးအနှစ်အရည်ကိုထည့်ပြီး မဆလာလေးအုပ်ကာ ချက်ထားတာပါ။
ဒါကတော့ ဂဏန်း မဆလာချက်ပါ။
ဒါကတော့ ပုဇွန်တွေကို ကြော်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားတာပါ။ ပုဇွန်ကို သန့်ရှင်း၊ ခေါင်းဖြတ်၊ အကြောဖယ်ပြီး ဆား၊ အရသာမှုန့် တို့နဲ့ နယ်ထားပါတယ်။ အကြော်မှုန့် (တန်ပူရာအမှုန့်)ကို ကြက်ဥနဲ့ နယ်ပြီး အရသာမှုန့်အနည်းငယ်၊ ဆားအနည်းငယ်ထည့်ထားပါတယ်။ နှမ်းအနက်ကို ဘေးမှာထားထားတာပါ။ ပုဇွန်တွေကို ကြက်ဥနဲ့ ဖောက်ထားတဲ့ အနှစ်ထဲမှာ လူးလိုက်ပြီး နှမ်းကပ်လိုက်ကာ ကြော်လိုက်တာပါ။
ဆီအိုးထဲထည့်ကြော်လိုက်ပါတယ်။ ပုဇွန်များ ရွှေရောင်သန်းလာရင် ချလို့ရပါပြီ။
ထမင်းရယ် ဂဏန်းချက်ရယ်၊ ပုဇွန်နှမ်းကပ်ကြော်ရယ် စားဖို့ အဆင်သင့်
ဒါကတော့ ကြက်ခြေထောက်ချဉ်စပ်ပါ။ လုပ်နည်းကိုတော့ ( ဒီနေရာမှာ) ရေးခဲ့ဖူးပြီးသားမို့ ထပ်မရေးတော့ပါဘူးနော်.
မစားသေးခင် ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံနေတဲ့ မော်ဒယ်လ်များ :P ဘေးနားက ဖန်ခွက်တွေကို အသာဖယ်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ပါတယ်.. (ရေနွေးကြမ်းခွက်တွေကို ပြောတာ )
စားပြီးတာနဲ့ ပြန်ကြတော့မဲ့ ညီမတွေကို ဒီဟင်းတွေ နှုတ်ဆက်လိုက်တာပါ။
ချစ်သော မိတ်ဆွေများအတွက် ပျော်ရွှင်ဖွယ်အားလပ်ရက်လေး ဖြစ်ပါစေနော်.
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Wednesday, December 14, 2011 Wednesday, December 14, 2011 Labels: ထူးဆန်းထွေလာ
ထူးထူးဆန်းဆန်း လူတွေရဲ့အရိုးတွေ၊ ခေါင်းတွေနဲ့ တန်ဆာဆင်ထားတဲ့ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဟာ အပြင်မှာ တကယ်ရှိပါတယ်ဆိုရင် ယုံချင်ပါ့မလားမသိဘူးနော်။ မယုံဘူးဆိုရင် အောက်က ပုံတွေမှာ ကြည့်နိုင် ပါတယ်။ လူတွေရဲ့ အရိုး အစစ် တကယ်ဟုတ်မဟုတ် သေချာ လေ့လာ စူးစမ်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ချက်ဇ် ရီပတ်ပလစ်နိုင်ငံကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လို့ လေ့လာနိုင်ပါတယ်နော်။ :P
ပုံမှာမြင်ရတဲ့ဘုရားကျောင်းဟာ အတွင်းထဲမှာတော့ လူ့အရိုးပေါင်းများစွာနဲ့ မျက်နှာကျက်တွေ နံရံတွေ၊ တိုင်တွေမှာ တန်ဆာဆင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချက်ဇ်ရီပတ်ပလစ်နိုင်ငံမှာ တည်ရှိတဲ့ Ossuary ဘုရားကျောင်းဟာ ဘယ်လိုများ တန်ဆာဆင်ထားသလဲဆိုတာ သိချင်ရင် ဘုရားကျောင်းထဲ ဝင်ကြည့်ကြပါစို့လားရှင်။
ပုံမှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်းပါဘဲ။ အားလုံးမြင်နေရတဲ့ အရိုးတွေ ဦးခေါင်းတွေဟာ တကယ်ကို လူရိုးတွေ ဖြစ်ပါ တယ်။ Ossuary ဘုရားကျောင်းဟာ (Bone Church) လို့ လူသိများပြီး ချက်ဇ်လိုတော့ Kostnice လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ လူပေါင်း ၄၀၀၀၀ ခန့်ရဲ့ အရိုးများကို ခင်းကျင်း ဆင်ယင်ထားတာ ဖြစ်ပြီး ဒီဘုရားကျောင်းကို ၁၃ရာစုမှာ ဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထုထည်ကြီးမားတဲ့ အဆောက် အဦး ဖြစ်သော်လည်း အလင်း ဝင်ပေါက်မှာ ပြတင်းပေါက်ခပ်ကျဉ်းကျဉ်း ကနေသာ ဝင်ရောက်နိုင်အောင် စီမံထားတာဖြစ်လို့ ဘုရားကျောင်းထဲမှာ လျှပ်စစ်မီးသာ မရှိလျှင် အေးစိမ့် မှုန်မှိုင်းနေမှာ သေချာပါတယ်။ ဘုရားကျောင်းရဲ့ နံရံ၊ မျက်နှာကျက် ကြည့်လေရာရာ နေရာတိုင်းမှာ လူတွေရဲ့ အရိုးတွေကို ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့ ပြုလုပ်ဖန်တီးထားတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအရိုးတွေဟာ ဘုရားကျောင်းရဲ့ သင်္ချိုင်း မှာ နောက်ထပ် အသစ်ရောက်လာတဲ့ လူသေ အလောင်းများ မြုပ်နှံရန် နေရာ လွတ်အတွက် ယခင်ကမြုပ်နှံ ခဲ့တဲ့ လူတွေရဲ့ အရိုးတွေကို ဘုရားကျောင်းမှာ ထိန်းသိမ်းထားရာကနေ ခုလို ပြုပြင်ဖန်တီးဖို့ စိတ်ကူး ရကာ ပြင်ဆင် ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားကျောင်း မျက်နှာကျက်ပေါ်မှာလည်း အရိုးတွေချိတ်ဆွဲထားတဲ့အပြင် မီးပန်းဆိုင်းကိုပင်လျှင် ပုံမှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်း အရိုးများနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမီးပန်းဆိုင်းဟာ မရဏမင်းရဲ့ မီးပန်းဆိုင်းလို့လည်း တင်စားကြပါသေးတယ်။
အထက်ပါ ဘုရားကျောင်းဟာ လာရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာသူများအတွက် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဖွင့်ထားပြီး ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ရက်နဲ့ ၂၅ရက် ၂ရက်တည်းသာ ပိတ်ပါတယ်။ ဝင်ကြေးမှာ ချက်ဇ်ငွေ 40Kč ဖြစ်ပြီး ကျောင်း သူကျောင်းသားများ ဆိုရင်တော့ 20Kč သာ ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ကင်မရာအတွက် အပိုကြေး 30Kč ထပ်မံ ပေးဆောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပိရမစ်ပုံ မာဘယ် ကျောက်သားတိုင်ကြီးရဲ့ ဘေးတစ်လျှောက်မှာတော့ အရိုးခေါင်းတွေဟာ ပါးစပ်ကြီးဟပြီး မိမိရဲ့ ခြေသလုံးရိုးကို ကိုက်ထားတဲ့သဏ္ဍာန် ပုံဖော်ထားပါတယ်။
ပုံတွေကြည့်ရတာ အားမရလို့ ဗီဒီယိုကြည့်လိုသူများ အောက်က ယူကျုမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်နော်။ ဘာတွေပြောနေတယ် ဆိုတာတော့ ဒေါ်ချောတစ်ယောက်လည်း နားမလည်ပါ။ အရိုးဘုရားကျောင်းကို သွားလိုသူများအတွက် လိပ်စာမှာ
Kutná Hora - Sedlec, 284 03
Tel. 728 125488
သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြသူ တစ်ချို့ကတော့ ဒီမြင်ကွင်းဟာ အနိဌာရုံမြင်ကွင်းဖြစ်တယ်။ ကြည့်တဲ့ သူတွေရဲ့ စိတ်ကို ခြောက်ခြားစေတယ်။ ကြက်သီးထစေတယ် လို့ ဆိုကြပါတယ်။ တစ်ယောက်ကတော့ ဘုရားကျောင်းရဲ့ reception desk မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အမျိုးသမီးကို “ခင်ဗျား.. ဒီလိုနေရာ မျိုးမှာ နေ့တိုင်းနေရတာ ဘယ်လိုမှ မခံစားရဘူးလား။ မကြောက်ဘူးလား” လို့ မေးတဲ့အခါ. “ အိုး.. ဒါတွေက သေပြီးသားသူတွေရဲ့ အရိုးတွေဘဲ.. အသက်ရှိတော့တာမှ မဟုတ်တာ။ ဘာကြောက်စရာရှိလဲ.. သူတို့က ဘယ်သူ့ကိုမှ နာကျင်အောင် မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ အသက်ရှင်နေတဲ့ သူတွေကသာ ဒုက္ခပေးနိုင်တာ၊ ကြောက်ဖို့ကောင်းတာ” လို့ ခပ်ပြတ်ပြတ် ပြန်ဖြေပါတယ်တဲ့။
ထိုအမျိုးသမီးကတော့ သတ္တိရှိလိုက်လေ.. ဒေါ်ချောတို့ကတော့ သွားလဲ မလည်ရဲသလို၊ အဲဒီနေရာမှာလည်း အလုပ်လုပ်ရဲမယ်တော့ မထင်ပါ။ သတ္တိက အဲသလိုကောင်းပါသည်။ :P အရိုးတွေနဲ့ ဘုရားကျောင်းကို ဗဟုသုတ သက်သက် အနေနဲ့ ဖော်ပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
Photos : Funzug.com, vagabondish.com
Ref: : The Bone Church by Christopher Cook